घर छ कच्ची र सानो । त्यहाँ केको सेल्फ आइसोलेसन ? कताको छुट्टै धारो, कताको शौचालय ? पीसीआर परीक्षण पर्याप्त छैन । सुदूरपश्चिमका केही गाउँका घर–घरमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ ।
पीसीआर नगरेरै संक्रमितलाई घर पठाउन थालिएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा पुगेको छ । क्वारेन्टिनमै पीसीआर गरेकालाई रिपोर्ट नआउँदै घर पठाउँदा र पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा रहेकालाई पनि सरकारी गाइडलाइन भन्दै पीसीआर नगरेरै घर पठाउन थालिएपछि समुदायमा संक्रमणको खतरा उच्च भएको हो ।
डोटीको शिखर गाउँपालिकामा त यस्तै लापर्बाहीका कारण समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ । पीसीआर रिपोर्ट आउनुअगाडि नै घर पठाइएका चार जनाका श्रीमतीमा शुक्रबार मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ ।
शिखर नगरपालिका–३ का तीन जना महिला र वडा–६ का एक जना महिला गरी चार जनामा श्रीमान् घर गएकाले संक्रमण फैलिएको हो । क्वारेन्टिनमा रहेका ती चारै जनाका श्रीमान्लाई स्वाबको नतिजा आउनुअगावै घर पठाइएको थियो ।
‘हामीले त्यसरी घर पठाउनु गल्ती भयो,’ डोटीबाट प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘निर्देशिकामा जेसुकै भए पनि उनको परिवारका सदस्यको स्वाब परीक्षण हुनुपर्छ भनेर धेरै प्रयास ग¥यौँ । १५ जना संक्रमितका श्रीमतीको मात्रै स्वाब संकलन भयो । त्योमध्ये चार जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यसलाई चरम लापर्बाही भन्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले जेठ २० मै सबै कोभिड अस्पताललाई परिपत्र गर्दै आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितमध्ये लक्षण नदेखिएकालाई १४ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि र लक्षण देखिएकालाई लगातार तीन दिनसम्म लक्षण नदेखिएमा पीसीआर परीक्षण नगरेरै घर पठाउन निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्देशनपछि मात्रै समुदायमा संक्रमण बढ्न लागेको हो ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ मा रहेको पशुपति माविको क्वारेन्टिनमा रहेका दुई सयभन्दा बढीमध्ये पीसीआर भएका ५० जनाको आरडीटी पोजिटिभ आयो । तीमध्ये कसैको जेठ १८ मा त कसैको जेठ २१ गते गरी ५० जनाको स्वाब संकलन भयो । तर, तीमध्ये सबैको स्वाबको रिपोर्ट समयमै आएन ।
आफूहरूको समयमा स्वाबको रिपोर्ट नआएको भन्दै उनीहरूले क्वारेन्टिनमै नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरे र जेठ २८ मा क्वारेन्टिन नियमको उल्लंघन गर्दै घर गए । असार ४ मा आएको स्वाबको रिपोर्टमा १८ जनामा संक्रमण देखियो । अहिले उनीहरू घरमा बसिरहेका छन् ।
रिपोर्ट आएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेका उनीहरू रिपोर्ट आउनुअगावै परिवार र आफन्तसँग घुलमिल भइसकेका थिए । त्यसपछि उनीहरू घरमै आइसोलेसनमा बसे पनि परिवारमा कोरोना संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । अहिलेसम्म उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परिवारका सदस्यको पीसीआर गरिएको छैन ।
परिवारको स्वाब संकलनको माग
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा–१ का चन्द्र विक र भीम विक दाजुभाइ हुन् । दुवै दाजुभाइ भारतको राजधानी दिल्लीबाट जेठ १२ मा गौरीफन्टा सीमा नाका हुँदै घर फर्के । उनीहरू सरकारको नियमअनुसार सीमा नाकाबाटै गाउँ लठैयामा रहेको पशुपति माविको क्वारेन्टिनमा पुगे । उनीहरूमध्ये त्यहाँ बसेका सयौँको आरडीटी भयो । चन्द्र र भीमसहित ५० जनाको आरडीटी पोजिटिभ आयो ।
आरडीटी पोजिटिभ आएपछि उनीहरूको जेठ १८ देखि पीसीआर संकलन सुरु भयो । कसैको १८ गते त कसैको २१ गते गरेर ५० जनाकै स्वाब संकलन भयो । २६ गते क्वारेन्टिनको अवधि (१४ दिन) पूरा भइसकेपछि पनि उनीहरूको जेठ २८ सम्म पनि पीसीआर रिपोर्ट आएन ।
उनीहरूले क्वारेन्टिनमै आन्दोलन गरे, नाराबाजी गरे । वडा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिसँग पीसीआर रिपोर्ट नआएको भन्दै विवाद भयो र उनीहरू जेठ २८ गते नै क्वारेन्टिन छोडेर घर गए । घरमा आमा, बहिनी, छोराछोरी र श्रीमतीसँग भेटघाट भयो । रोपाइँको बेला भएकाले उनीहरूले खेतमा पनि काम गरे ।
तर, असार ४ मा उनीहरूको स्वाबको रिपोर्टमा कोरोना पुष्टि भयो । स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि घरमा आए र घरमा रातो रिबन बेरेर सिल गरे । दुवै जना घरनजिकैको सानो कटेरोमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसे तर उनीहरूको परिवारमा पनि संक्रमण भइसकेको भन्दै त्रास छ ।
गौरीगंगा नगरपालिका वडा–१ मा पर्ने झिल भन्ने स्थानका कृष्णबहादुर रम्तेलको पनि जेठ १८ मा लगिएको स्वाबको नमुनाको रिपोर्ट असार ४ मा पोजिटिभ आयो । उनी पनि जेठ २८ मा गरिएको आन्दोलनपछि घर गइसकेका थिए ।
कृष्णबहादुर भन्छन्, ‘लक्षण केही थिएन, कोरोना होला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । घर गइयो । मैले त ठूलोबुबा, मावलीसहित धेरै ठाउँमा गएर भेटघाट पनि गरँे । पीसीआर रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टिनको कष्टकर बसाइमा अल्झाइराखेको जस्तो लागेर घर आएको हुँ । अब आमा र बहिनीलाई पनि कोरोना स¥यो कि भनेर चिन्ता लागिरहेको छ ।’
कृष्णको सानो कच्ची घर छ । घरमा रहेका आमा, बहिनी र उनले एउटै धारा प्रयोग गर्छन् भने उनीहरूको शौचालय पनि एउटै छ । ‘यस्तोमा कसरी अलग्गै बस्नु ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकार नभएको अनुभूति भएको छ । हामी सबै संक्रमितका परिवारका सदस्यको पनि पीसीआर टेस्ट गरिनुपर्छ ।’
गौरीगंगा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष जीतबहादुर चौधरी भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वाबका नमुना बढी भइसकेकाले संकलन नगर्न भनेको बताउँछन् । ‘हामी आफँै भीटीएम किनेर स्वाब संकलन गरेर पठाउन तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रदेशमा जाँच गर्नका लागि नमुना बढी भए भनेर हामीलाई स्वाब संकलन नगर्न भनिएको छ । हाम्रो हात सरकारले नै बाँधिदिएको छ ।’
समुदायकै मतले जितेको र समुदायमै काम गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू सबैभन्दा बढी सकसमा परेको चौधरीले बताए । ‘क्वारेन्टिनमा भएका सबै समस्यासँग पनि हामीले नै जुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट समयमा आएन भने पनि हामीलाई नै गाल पर्छ । समुदायमा संक्रमणको यस्तो खतरा बढिसकेको छ । उता प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य निर्देशनालयले हाम्रा कुनै कुरा सुन्दैनन् ।’
परिवार भन्छ– ‘डर लागिरहन्छ’
पार्वती विक संक्रमित चन्द्रकी आमा हुन् । चन्द्र र भीमलाई कोरोना संक्रमण भयो भनेर घरमा रातो रिबनको सिल लगाएपछि वृद्ध आमा चिन्तामा छिन् । भन्छिन्, ‘कान्छो छोराको सानो नाति छ । म आफैँ बूढी मान्छे, छोराबुहारी पनि छन्, अरूलाई पनि सरी पो सक्यो कि भनेर चिन्ता लागिरहन्छ ।’
चन्द्र र भीमको घर जोडिएको छ । भीमकी श्रीमती स्वास्थ्यका हिसाबले कमजोर छिन् । चन्द्रको पाँच जनाको परिवार छ भने भीमको सात जनाको । भीमकी श्रीमती जमुना भन्छिन्, ‘आफैँ पनि कमजोर छु, कमजोरलाई छिटो सर्छ भन्छन् । बाबुनानी पनि छन् । अब परिवारका सबैको स्वाब जाँच गरिदिनुपर्छ ।’
चन्द्र र भीमको घरसँगै उनकी फुपूको घर पनि जोडिएको छ । उनको परिवारमा आठ जना सदस्य छन् । एकैमा जोडिएका तीन वटा घरमा दुई जना संक्रमितको हिमचिमले कस–कसलाई कोरोनाको संक्रमण भयो, थाहा छैन । संक्रमित भएका युवा आफूहरू घरमै आइसोलेसनमा बसेको बताइरहेका छन् ।
आइतबार वडा अध्यक्ष जीतबहादुर चौधरी र नगरपालिकाको स्वास्थ्यकर्मीको टोली आएर भीम, चन्द्रसहित वडाभरिका १८ जनाको घरमा लगाएको रातो रिबनको सिल हटाएर गएका छन् । संक्रमित चन्द्र भन्छन्, ‘वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्यकर्मीको टोली आयो, रातो रिबन हटायो र हामीलाई भन्यो– ‘तिमीहरू अब कोरोनामुक्त भइसक्यौ, घरमा पस्दा हुन्छ ।’ तर, हामीलाई दोस्रो पटक पीसीआर चेक गरिएको छैन । उनीहरूले मुखले भनेकै भरमा कसरी पत्याउनु ?’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका र लक्षण नदेखिएका, लक्षण देखिएर तीन दिनसम्म निको भएका संक्रमितलाई अन्तिम पीसीआर नै नगरेर घर पठाउने निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
यो निर्णयले समुदायमा संक्रमण फैलिने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले असार ८ मा आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको पीसीआर जाँच गरेर नेगेटिभ भएपछि मात्र घर पठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइसोलेसनमा राखिएकालाई घर पठाउँदा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘राज्य संयन्त्रद्वारा स्थापित परीक्षणबाट संक्रमित देखिएका बिरामीहरू जुन मानसिक सन्त्रासमा हुन्छन्, सो कुराको निवृत्ति पनि परीक्षणद्वारा नै गरी उनीहरूलाई आफू स्वस्थ छु भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ’– सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य निर्देशनालले यो आदेशबारे संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय, निर्देशन नआएको जनाएको छ । प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त यो निर्णय खारेज गरी हरेक संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गरेर, नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्रै घर पठाइनुपर्छ भनेर असार ११ देखि संसद् नै अवरुद्ध गरेको छ ।
‘सरकारको निर्णयले गाउँ–गाउँमा त्रास फैलिएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘यो निर्णयले सरकारले कोरोनाको उपचारमा हात उठाएको जस्तो देखिन्छ । अहिले नै सरकारले लत्तो छाड्न पाउँदैन । त्यसैले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिनबाट रोक्ने उपाय सोच्नपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेका हौँ ।’